समाचार | गृहपृष्ठ | Page 2252
असार १, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आइतवारको बैठकमा सांसदहरुले गुठीका सम्बन्धमा आएको पछिल्लो विधेयकले समस्या समा...
यार्सागुम्बाको उत्पादन घट्दो, यार्सा नपाउँदा फर्किदैं सर्वसाधारण
असार १, काठमाडौं । बहुमूल्य हिमाली जडीबुटी यार्सागुम्बा संकलनका क्रममा यस वर्ष डोल्पा र दार्चुलामा लेक लागेर ए...
गुठी विधेयकमा कमजोरी भए सच्याइन्छ, सरकारले जनताको मन दुखाउँदैन : प्रधानमन्त्री ओली
असार १, काठमाडौं (अस) । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गुठी विधेयकमा केही कमी कमजोरी भए सच्याइने बताउनुभएको छ...
असार १, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ९ दिने युरोप भ्रमण सकेर आइतवार स्वदेश फर्किनुभएको छ । अन्तरराष...
लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति भएन : उद्योगी
काठमाडौं । उद्योगी र व्यवसायीले लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति नभएको गुनासो गरेका छन् । नेपाल व्यवस्थापन संघले रा...
सोमवारदेखि आर्थिक सम्मेलन
on: February 21, 2014 समाचार
२७ परियोजनाका लागि विदेशी लगानी खोजिने फागुन ८, काठमाडौं । नेपाललाई लगानीको आकर्षक थलो बनाउने मुख्य नाराका साथ राजधानीमा नेपाल आर्थिक शिखर सम्मेलन आयोजना हुने भएको छ । सरकारसँगको सहकार्यमा न...	बिस्तृतमा
९ वर्षमा बुटवल पावरको २४८ प्रतिशत प्रतिफल
आव २०६९/७० का लागि १८ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव फागुन ८, काठमाडौं । बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी)ले विगत ९ वर्षमा शेयरधनीलाई कुल २ सय ४८ प्रतिशत प्रतिफल वितरण गरेको छ । कम्पनीले २ सय...	बिस्तृतमा
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको ‘फोकल प्वाइण्ट’ अख्तियार
फागुन ८, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको काम छिटो सम्पन्न गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ‘फोकल प्वाइण्ट’को व्यवस्था गरेको छ । त्यस्ता आयोजनाहरूको काम सही...	बिस्तृतमा
on: February 20, 2014 समाचार
फागुन ७, कञ्चनपुर । पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले होटल व्यवसायी सङ्घ कञ्चनपुरले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई ५ दिन पर्यटकीयस्थलमा बसाउने योजना बनाएको छ । पश्चिमी सिमानाका...	बिस्तृतमा
तेलको मौज्दात ३१ हजार केएल पुग्यो
आइतवारसम्म रू. ९ अर्ब नबुझाए कोटा कटौती हुन सक्ने फागुन ७, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले तेलको मौज्दात बढाएर ३१ हजार किलोलिटर (केएल) पुर्‍याएको छ । सामान्य समयमा १८ देखि २१ हजार केएलसम्म म...	बिस्तृतमा
सात कृषि वस्तुको उत्पादनमा साढे २८ अर्ब सहयोग
फागुन ७, काठमाडौं । सरकारले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस)मा समावेश सात कृषि वस्तुमा २८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ लगानी थप्ने भएको छ । यसअघि यी वस्तुको उत्पादनमा करीब ५ अर्बमात्रै लगानी ग...	बिस्तृतमा
युवा जनशक्ति पलायन हुँदा कर्जा विस्तारमा कठिनाइ
वैदेशिक रोजगारीको प्रभाव फागुन ७, काठमाडौं । युवा जनशक्ति विदेशिने क्रम बढेपछि ग्रामीण क्षेत्रमा लघुकर्जा विस्तारमा समस्या देखिएको छ । ग्रामीण भेगमा काम गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति अभाव भएकाले य...	बिस्तृतमा
अख्तियारमा निर्माण र शिक्षासम्बन्धी उजुरीको चाङ
फागुन ७, सुर्खेत । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मध्यपश्चिम क्षेत्रीय कार्यालयमा निर्माण र शिक्षासम्बन्धी हिनामिनाका उजुरीहरूको चाङ लागेको छ । आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय सुर्खेतमा स्थापन...	बिस्तृतमा
नेपाल प्रधानमन्त्री कोइरालाका आर्थिक सल्लाहकार
फागुन ७, काठमाडौं (अस) । अर्थविद् डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफ्नो आर्थिक सल्लाहकार नियुक्ति गरेका छन् । खुला अर्थतन्त्रका पक्षधर नेपाल यसअघि अर्थ मन्त्रालयका प्रमु...	बिस्तृतमा
अपमानित भएर सरकारमा जाँदैनौं : नेता नेपाल
फागुन ७, रौतहट (अस) । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सम्मान र बराबरीको दर्जा नदिएमा अपमानित भएर एमाले सरकारमा नजाने बताएका छन् । रौतहट सदरमुकाम गौरमा बुधवार प्रजातन्त्र दिवसका अ...	बिस्तृतमा